सिल्टल्ट: कसरी क्रेग्ससूचीबाट डेटा स्क्रैप गर्ने
क्रेग्सलिस्ट शायद स्क्रैप गर्न सबै भन्दा कठिन साइट हो।. तथापि, एक उपयुक्त डेटा स्क्रैप आर यो प्रक्रियालाई कम निराशा बनाउन सक्छ. जब तपाइँ सजिलै केहि साइटहरूको एपीआईबाट डेटा खिच्न सक्नुहुनेछ, Craigslist को API ले तपाईंलाई केवल पढ्ने मात्र डेटा लगाउन अनुमति दिन्छ।. यसको सट्टा, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिन्छ, तथापि थोकमा पनि. यद्यपि, तपाईं अझै पनि Craigslist स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं सही स्क्रैपिंग उपकरण रोज्नुहोस्.
दायाँ क्राइग्सलिस्ट स्क्रैप छनौट
तपाईंको लक्ष्य एक स्क्रैर छान्नु भएको छ जुन तपाईंलाई आवश्यक सबै जानकारी फसल गर्न सक्षम हुनेछ।. तपाईं एक मुक्त डेटा स्क्रैर वा भुक्तान गरिएको एक को लागी रोज्न सक्नुहुन्छ.
नि: शुल्क डेटा स्क्रैपर
स्क्रैप एक सबै-उद्देश्य स्क्रैपिंग समाधान हो जसले तपाईंलाई Craigslist स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ।. यो केही राम्रो तरिकाले Craigslist तर विभिन्न साइटहरूमा. चाहे तपाईं आधारभूत वा जटिल कार्यहरू गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले भर्खरै स्क्रिन प्रलेखन र ट्यूटोरियललाई यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक छ।.
भुक्तानी डेटा स्क्रैपर
दृश्य वेब राइपर एक शक्तिशाली स्क्रैपिंग उपकरण हो जसले तपाईंलाई Craigslist स्क्रैप गर्न सक्षम गर्दछ।. स्क्रैर ग्राफिक विशेषताहरू र ट्यूटोरियलहरू यसलाई प्रयोग गर्न अत्यन्तै सजिलो बनाउँदछ. तथ्य वेबसाईट भिजुअल वेब रिपर अपेक्षाकृत pricey केहि प्रयोगकर्ताहरु को लागि एक चुनौती हो. यद्यपि, यो निःशुल्क जीवनकाल अपग्रेडको साथ प्रस्तावित छ.
कुन स्कोपर उत्तम हो?
यदि तपाईं स्तरीय स्क्रैपिंग सेवाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले माथिको स्क्रैपर्स छनौट गरेर गल्ती गर्नुहुन्न।.
डेटा स्क्रैपर्स को बारे मा के बारे मा सीraigslist को लागि डिजाइन गरिएको थियो? जबकि यो राम्रो लाग््छ, क्रेग्ससूचीको लागि सिर्जना गरिएको स्क्रैपर्सहरू सीमित छन् किनकी तपाइँ तिनीहरूलाई अर्को साइटमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न.
प्रयोग गरेर क्रेग्ससूची स्क्रैपर्स पत्ता लगाएर रोक्न आक्रामक हो।. यदि तपाईंले ध्यान दिनुभएको छ भने, तपाईंको आईपी ठेगाना रोकिएको छ, तपाइँ प्रोक्सी आईपी ठेगाना प्रयोग गरी तपाईंको पहिचान लुकाउन सक्नुहुनेछ. प्रोक्सीले तपाईंको पहिचान र कार्यहरू लुकाउँछ त्यसैले तपाई (3 9) बिना देख्न सकिने डेटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ.
तपाईंको प्रोक्सीहरु कन्फिगर कसरी गर्ने?
प्रोक्सी कन्फिगरेसनमा तपाईले प्रयोग गर्न चाहानु भएको स्क्रैरको प्रकारमा निर्भर गर्दछ. दृश्य वेब रिपपर कन्फिगर गर्न, "प्रोक्सीहरू" ट्याबको लागि हेर्नुहोस् र आवश्यक जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्.
स्क्रैप कन्फिगर गर्न, तपाईंले प्रोक्सी कसरी कन्फिगर गर्ने कागजातमा सन्दर्भ गर्न आवश्यक छ. यो नि: शुल्क डेटा स्क्रैपर प्रयोग गर्दा यो आदर्श हो.
स्क्रैपर को लागी नियुक्ति
तपाईको समय लिनुहोस् र तपाइँले तपाइँको उपकरण प्रयोग गर्नु अघि सबै चीज सेट गर्नुहोस्. एकपटक उपकरणको सेटिङ जाँच गरिसकेपछि, स्क्रैर सुरू गर्नुहोस् र तपाईलाई क्रेग्ससूचीबाट सबै डाटा प्राप्त गर्नुहोस्.
क्रेग्ससूची डेटा आवेदन
Craigslist डेटा को विभिन्न तरिकाहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ प्रयोग गरिएको कार खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले मूल्यहरु को तुलनामा सबै डाटाहरु लाई स्क्रैप गर्नका लागि तिनीहरूको मूल्य तुलना गर्न र स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ।. तपाईं सीरेग्सलिस्ट डेटा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सुरागहरू, जासूस प्रतियोगीहरू र धेरै बढि. यो स्क्रैप गरिएको डाटा प्रयोग गर्न केही तरिकाहरू हुन्.
अब तपाईलाई थाहा छ कि कसरी Craigslist बाट डेटा स्क्रैप गर्ने Source . एक राम्रो स्क्रैपिंग उपकरण पाउनुहोस्, र तपाईं Craigslist मा आवश्यक सबै कुरा फेला पार्नुहुनेछ!